Afaka maminavina horohoron-tany ve i Shina?
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Afaka maminavina horohoron-tany ve i Shina?
Ny horohoron-tany mialoha mialoha dia mety hamonjy ain'olona sy loza lehibe. Ny valiny dia mety avy any Shina avy amin'i AETA
Ny horohoron-tany dia mety handrava ary hatramin'ny vanim-potoana maoderina dia fanantenana ny hanana rafitra afaka maminavina marina ny loza toy izany.
Orinasa sinoa antsoina hoe Acoustic Electromagnetic mankany AI'. mety nahita vahaolana
Tamin'ny taona 2020, ireo ekipa 10 ambony dia nahatratra 70% ny tahan'ny fahamendrehana ho an'ny tarehin-taratra YES / NO, ny haavon'ny toerana avo ary ny halehibeny.
Vao tsy ela akory izay, ekipa mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Peking dia nanomboka niasa tamin'ny rafitra iray natao haminavina mialoha ny horohoron-tany andro vitsivitsy talohan'ny nisehoan'izy ireo tamin'ny valiny marim-pototra azo antoka. Nanomboka nifindra tany amin'ny tontolon'ny nomerika ny olona tamin'ny fampiasana angon-drakitra lehibe sy fanofanana AI hanampiana betsaka ny olombelona.
Ny ekipa mpikaroka no nanome anarana an'io tetikasa io AETA, izay midika hoe 'Acoustic Electromagnetic mankany AI'. Ny ekipa dia nanomboka tamin'ity iraka ity tamin'ny 2010, taorian'ny horohoron-tany roa nandrava an'i Sichuan sy Qinghai, izay nisy ny ain'olona 400,000 XNUMX mahery.
Nandritra izay 4 taona lasa izay, ny ekipan'ny AETA dia nametraka rafi-pandrefesana maherin'ny 300+ ampahany, ampiasaina hanangonana data momba ny saha akustika sy electromagnetika any amin'ireo faritra tratry ny horohoron-tany, izay faritra betsaka ao amin'ny faritra Sichuan, amin'izao fotoana izao dia maherin'ny 3TB ny angona angonina.
Miaraka amin'ity angon-drakitra ity, ny ekipa dia afaka nampiofana ny algorithman'izy ireo handamina ny angon-drakitra taloha ka hatramin'ny, mandritra ary aorian'ny horohoron-tany, mampianatra ny algorithm haminavina ireo horohoron-tany ho avy amin'ny alàlan'ny angon-drakitra tena izy.
Tamin'ny taona 2020 ny ekipan'ny AETA dia nikarakara fifaninanana 9 volana, nanasa ireo oniversite sinoa, ivon-toerana fikarohana ary mpianatra handray anjara. Ny ekipan'ny AETA dia nizara ny angon-drakitra rehetra nangonina tao anatin'ny 4 taona lasa, izay nisy fotoana nahitana horohoron-tany. Avy eo dia nomen'izy ireo alalana hiditra amina ekipa mivantana ireo ekipa ary nasainy natolotry ny mpifaninana ny valiny.
Ny maha-marina ny algorithm avy amin'ny ekipa tsirairay dia voafaritra amin'ny antony telo lehibe: Voalohany, ny tahan'ny ENY / TSIA raha hisy horohoron-tany, faharoa, ny foiben'ny horohorontany, ary fahatelo, ny haben'ny horohoron-tany. Ireo fandrefesana 3 ireo dia mamaritra ny tahan'ny fahombiazan'ny ekipa.
Amin'izao fotoana izao, ny ekipa AETA dia nandefa fifaninanana vaovao ho an'ny 2021, nanasa ny vondrona iraisam-pirenena hisoratra anarana sy handray anjara. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana 2021 ary haharitra hatramin'ny 31 martsa.
Ny rafitry ny sensor an'ny fitaovana AETA dia novolavolain'i SVV, fampivoarana fitaovana mifantoka amin'ny fanavaozana, ary orinasa mpamokatra. Ankoatr'izay, ny tetikasa AETA dia nisarika ny sain'ny CSDN, Capgemini, ary andrim-panjakana maro hafa.
Hentitra ny ekipan'ny AETA, sy ny mpiara-miombon'antoka, fa hamaha ny zava-miafina ao ambadiky ny horohoron-tany mialoha izahay, ary hanomboka hanitatra an'io vahaolana io manerana an'izao tontolo izao, ary hamonjy ain'olona an-tapitrisany amin'ny ho avy.
Sina dia firenena misy horohoron-tany matetika ary faritra misy lesoka betsaka. Ny horohoron-tany, indrindra ny horohoron-tany lehibe, dia mety hiteraka fahasimbana tsy tambo isaina amin'ny ain'ny olona sy ny fananany raha vantany vao miseho any amin'ny faritra be olona izany nefa tsy fantatry ny olona. Tena fanamby ary misy lanjany ara-tsiansa lehibe sy manan-danja ara-tsosialy ny fanatanterahana ny asa fikarohana ny fandinihana mialoha, ny fandalinana ny fifandraisana, ny fikarohana mekanika mialoha ary ny maodelin'ny faminaniana momba ny horohoron-tany manodidina ny vahaolana amin'ny faminaniana momba ny horohoron-tany sy ny olana eo amin'ny toetr'andro.
Ny ivon-toerana fikarohana sy horohoron-tany momba ny horohoron-tany momba ny horohoron-tany sy ny fitrandrahana ny oniversite ao amin'ny Peking University Shenzhen Grgraduate School dia namorona rafitra fanakorontanana elektromagnetika malalaka sy rafitra fanaraha-maso geo-acoustique, antsoina hoe rafitra fanaraha-maso horonantsary sy fizarana AETA.
AETA, fohy ho an'ny Acoustic & Electromagnetism To AI, ny rafitra dia ahitana:
fanadihadiana iray momba ny feo acoustique: hanangonana angona geo-acoustique
fanadihadiana iray momba ny electromagnetic iray: hanangonana angona fikorontanana elektromagnetika
fitaovana terminal iray: mifandray amin'ny sensor roa amin'ny tariby, ho an'ny fizotran'ny data, fitahirizana vonjimaika ary fampidinana (amin'ny alàlan'ny tariby, wifi na tamba-jotra 3 / 4G)
tahiry data: mampiasa AliCloud amin'izao fotoana izao
Nanomboka tamin'ny taona 2016, seta 300 no naparitaka any amin'ireo faritra be fihetsika mahery vaika indrindra ao Shina, ka setra 240 ao Sichuan / Yunnan sy ireo faritany manodidina azy, ary setma 60 any amin'ny faritra hafa. Betsaka ny rafitra haparitaka raha vantany vao misy famatsiam-bola fanampiny. Amin'izao fotoana izao dia angona 38TB no nangonina, ary angona 20GB no angonina isan'andro. Nahita marika famantarana vitsivitsy mifandraika amin'ny horohoron-tany misy toetran'ny horohorontany tsy ho ela isika. Miorina amin'ireo fikarohana ireo dia natao ny vinavinan'ny horohoron-tany mahery vaika. Na dia nisy aza ny fandrosoana natao, ny vahaolana amin'ny olan'ny faminaniana amin'ny horohorontany lavitra dia lavitra dia mila famakafakana sy fikarohana bebe kokoa.
"Fifaninanana Algorithm AI Faminaniana ny horohoron-tany AETA" dia mikendry ny hitrandraka ny fifandraisana misy eo amin'ny angon-drakitra mialoha sy ny horohoron-tany misy singa telo amin'ny alàlan'ny algorithma vaovao, ny fahitana ireo fambara tsy mahazatra sy ireo fiasa mifandraika amin'ireo horohoron-tany mananontanona, ary ny fananganana maodelin'ny faminaniana momba ny horohoron-tany miorina amin'ny angona fandinihana ara-tantara sy ny katalaogan'ny horohorontany, ao amin'ny ny fanantenana hampiroborobo ny vahaolana amin'ny olana ara-tsiansa momba ny vinavinan'ny horohoron-tany sy ny vinavina. Mandritra izany fotoana izany dia manantena ihany koa izahay fa amin'ity fifaninanana ity dia handray anjara bebe kokoa ny fandraisana anjaran'ny olona avy amin'ny saranga rehetra ary teknolojia sy fomba vaovao no hampiharina amin'ny vinavinan'ny horohoron-tany.
Olana sy angona
Faminaniana ny horohoron-tany ho an'ny herinandro ho avy isaky ny Alahady mifototra amin'ny angona manan-tantara avy amin'ny tamba-jotra AETA any amin'ny faritra Sichuan sy Yunnan. Ny haben'ny horohorontany kendrena dia tokony hitovy na lehibe noho ny 3.5. Ny laharam-pehintaniny dia 22 ° N -34 ° N, 98 ° E -107 ° E. Ho an'ny horohoron-tany izay manana maridrefy 3.5 na lehibe eo amin'ilay faritra kendrena, dia tsy ho isaina izany raha tsy misy gara AETA ao anatin'ny 100km.
Data momba ny fanofanana ho an'ny fananganana modely
Karazan-tahiry 91 karazana fikorontanana elektromagnetika sy geo-acoustique no homena ny ekipa rehetra. Ny elanelam-potoana isaky ny angon-drakitra dia 10 minitra izay voamarika amin'ny timestamp. Ny famaritana ireo antontam-baovao 91 karazana dia ho faritana ao anaty rakitra read me. Ny vanim-potoanan'ny data dia manomboka amin'ny 1 Oktobra 2016 ka hatramin'ny 31 Desambra 2020. Ho fanampin'izany, misy koa ny katalaogan'ny horohoron-tany momba ny hetsika seismika .3.5 ao amin'ny faritra kendrena. Ny katalaogan'ny horohorontany dia avy amin'ny China Earthquake Network Center (CENC, http://news.ceic.ac.cn)
Tahirin-kevitra amin'ny fotoana tena izy ho an'ny vinavina
Manomboka amin'ny 1 Janoary 2021, karazana data 91 momba ny korontana elektromagnetika sy ny geo-acoustique no havaozina isan-kerinandro. Ny ekipa dia afaka misintona data isan-kerinandro. Misy fomba roa fampidinana data. Ny iray dia ny fampidinana an-tanana ny angona avy amin'ny tranokala. Ny iray hafa dia ny fampidinana data ho azy amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny server data amin'ny alàlan'ny programa azo tanterahina izay homen'ny mpampiantrano. Ny faminaniana isan-kerinandro dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fomba roa toa ny fampidinana data ihany
Hevitra folo manandanja amin'ny fanarenana orinasa
Firenena folo azo antoka indrindra miaraka amin'ny valin'ny areti-mandringana COVID tsara indrindra